जाम परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स जाम परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
जाम परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
आज हामी जाममा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं परीक्षा। संयुक्त प्रवेश मैट्रिक बोर्ड परीक्षा नाइजेरियाको सबैभन्दा लोकप्रिय परीक्षा मध्ये एक हो। सम्भवतः धेरै मानिसहरू जाम्बको नियमित ग्राहक बनेका छन्। तिनीहरू प्रत्येक वर्ष परीक्षा लेखिरहन्छन् किनकी तिनीहरूले परीक्षामा असफलताको अनुभव गरिरहेछन्।
दुर्भाग्यवस के यो छ कि यो परीक्षा बिना, विश्वविद्यालय वा पॉलिटेक्निकमा प्रवेश प्राप्त गर्न सम्भव छैन। आज, परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना बाहेक, हामी इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा सफलतापूर्वक कसरी पार गर्ने बारे केही सुझावहरू सिकाउनेछौं। ख्रीष्ट विफल हुनुहुन्न, त्यसैले तपाईं असफल हुन सक्नुहुन्न। म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश गर्दछु, हरेक शक्ति जसले तपाईंलाई जाम परीक्षा लेख्दा बाधा दिन्छ, म प्रार्थना गर्दछु कि उनीहरूले येशूको नाममा आगो लगाए।
यदि तपाई बर्षौं बर्ष जाम्ब लेख्दै हुनुहुन्छ र तपाईले भाग्य पाउनु भएन भने, परीक्षामा तपाईको सफलतालाई सुरक्षित गर्न तलका सुझावहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
JAMB परीक्षा पास गर्न सुझावहरू
जाम पाठ्यक्रम अध्ययन गर्नुहोस्
जब कुनै दिशा छैन, व्यक्ति हराउँछन्। JAMB को पाठ्यक्रममा परीक्षा परिषदको लागि योजना समावेश छ। यो त्यहि हो जहाँ परीक्षा प्रश्नहरु लिनेछन्। JAMB पाठ्यक्रमले महत्वाकांक्षी विद्यार्थीहरूलाई के पढ्ने र परीक्षाको तयारीको लागि दिशा निर्देशन दिन्छ।
JAMB ले यो पाठ्यक्रम विद्यार्थीहरूलाई विमोचन गर्नुको एक कारण उनीहरूलाई पढ्नको लागि क्षेत्रहरू जान्न सहयोग गर्नु हो। परीक्षा परिषदले यो बुझ्दछ कि विद्यार्थीले कामको सम्पूर्ण योजना पढ्न सम्भव छैन। त्यसैले पाठ्यक्रम परीक्षाको लागि ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षेत्र जस्तै छ।
जाम परीक्षा प्रश्न चार विषय कभर। चार विषयहरूको बीचमा, अंग्रेजी सबैभन्दा अनिवार्य हो कि प्रत्येक विद्यार्थीहरूले आफूले लिने कोर्सको ध्यान नदिई लेख्नेछन्। यदि एक विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषामा उच्च अंक प्राप्त गर्न सक्दछ, यसले कुलमा उच्च स्कोर हुने तिनीहरूको अवसरलाई बढावा दिन्छ।
अ questions्ग्रेजी प्रश्नहरूको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण खण्ड मध्ये एक साहित्य समीक्षा हो जुन सामान्यतया प्रश्नहरू हुन् एक साहित्यिक पाठ जुन महत्वाकांक्षी विद्यार्थीहरूलाई दिइन्थ्यो। जब तपाईं सिलेबस अध्ययन गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले उपन्यास अध्ययन गर्न खाली समय सिर्जना गर्नुभयो।
विगतका प्रश्नहरू प्रयोग गर्नुहोस्
परीक्षामा सफलताको लागि अर्को सल्लाह विगतको प्रश्न प्रयोग गरेर हो। धेरै जसो प्रश्नहरू दोहोर्याइन्छन्। जे होस्, यदि विद्यार्थीले विगत प्रश्नको अध्ययन नगरेको खण्डमा कसरी विद्यार्थीले यसलाई ठूलो बनाउन सक्दछन्?
जब तपाईं जाम सिलेबस अध्ययन गर्नुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले विगतका प्रश्नहरूको प्रयोग प्रश्न प्रश्नको संरचनाको अध्ययन गर्नका लागि गर्नुभयो।
कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्
ती दिनहरू गए जब परीक्षा मसी र कागजको साथ लेखिएको थियो, अब यो कम्प्युटरको साथ छ। यसले केवल सफलतालाई सुचारु गरेको छ जसलाई कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्ने विचार छ।
तपाईले पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न र विगतका प्रश्नहरूको प्रयोगमा समय व्यतीत गर्ने क्रममा पनि, कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्ने सिक्नको लागि पनि समय सिर्जना गर्नुहोस् यदि तपाइँ कसरी एउटा अपरेट गर्ने तरिका जान्नुहुन्न। यदि तपाईंलाई उत्तर सहि थाहा छ भने पनि, तपाईं अझै पनि यो असफल हुन सक्नुहुनेछ तपाईंको कम्प्यूटर ज्ञानको स्तरको कारण।
जब कुनै व्यक्तिले आफैंले सबै चीजहरू गर्न पर्याप्त छ भन्ठान्छ, तब परमेश्वर आफैंलाई माफ गर्नुहुनेछ र त्यस व्यक्तिलाई कष्ट भोग्न दिनुहुनेछ। परीक्षाको तनावबाट टाढा नहुनुहोस् जुन तपाईं परमेश्वरको स्थान बिर्सनुभयो।
तपाईको नश्वर ज्ञानमा मात्र निर्भर नहुनुहोस् कि तपाईलाई परमेश्वरबाट कुनै सहायताको आवश्यक पर्दैन। किनकि परमेश्वर सधैं यसको लागि प्रार्थना गर्नेहरूलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसमा धर्मशास्त्रको पुस्तकले भन्छ कि छक्क लाग्दैन मैथ्यू:: Ask सोध्नुहोस्, र यो तपाईंलाई दिइनेछ; खोज्नुहोस् र तिमीहरू पाउनुहुनेछ। ढकढक्याउनुहोस्, र यो तपाईं को लागि खोलिनेछ। यसको माग गर्ने जोसुकैलाई पनि परमेश्वरले कहिल्यै सहयोग अस्वीकार गर्नुभएको छैन।
कम्प्युटरको पावनका लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
एउटा अन्य कारण किन कोही व्यक्तिहरू जाम असफल हुन्छन् किनकी तिनीहरू डुलार्डहरू होइनन्, कहिलेकाँही यो कम्प्युटरको अयोग्यताको कारण हुन्छ। जब तपाईं आँखा बन्द जाम परीक्षा को लागी प्रार्थना गर्न, सबै प्रार्थनाहरु प्रयोग गर्न को लागी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईले प्रयोग गर्नुहुने एक।
प्रार्थना गर्नुहोस् कि त्यस दिनमा काम गर्नको लागि कम्प्युटरहरू राम्रो अवस्थामा छन्।
म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको दयाले प्रार्थना गर्दछु, तपाईं येशूको नाममा यस परीक्षालाई असफल गर्नुहुन्न। असफलताको आत्मालाई स्वर्गको अधिकारले तोड्यो।
हे प्रभु येशू, म तपाईंलाई जीवनको वरदानको लागि ठूलो बनाउँछु, प्रभु तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्.
प्रभु येशू, म शत्रुको सबै योजनाहरू हप्काउँछु ताकि म येशूको नाममा अर्को जाम जाँचमा बसोस्।
प्रभु येशू, म अनुग्रहको लागि प्रार्थना गर्दछु कि चीजहरू सही र मौलिक रूपमा बुझ्न। म प्रार्थना गर्दछु कि स्वर्गको अधिकार द्वारा, येशूको नाममा मेरो सफलता हो।
म कुनै प्रकारको प्रभावको बिरूद्ध छु, यो येशूको नाममा नष्ट हुन दिनुहोस्। म सबै कम्प्युटरहरूलाई ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतद्वारा पवित्र पार्दछु। म प्रार्थना गर्दछु कि त्यो दिन, तिनीहरू खराब नहोस्एन येशूको नाममा।
म मेरो जीवनमा असफलताको हर भावनाको बिरूद्ध आउँछु, म प्रार्थना गर्दछु कि यो येशूको नाममा नष्ट होस्.
प्रभु येशू, म बिन्ती गर्दछु कि विगतका प्रश्नहरू र पाठ्यक्रमहरू भन्दा पर तपाईंको आत्माले मलाई येशूको नाममा पढ्नको लागि निर्देशन दिन्छ।
म मेरो बाटोमा अलमल्याउने सबै प्रकारको बिरूद्ध आउँछु, तिनीहरूलाई येशूको नाममा नष्ट गर्न दिनुहोस्। म शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्नका निम्ति हरेक योजनाहरू विरूद्ध आउँछु, म तिनीहरूलाई पवित्र आत्माको आगोले नष्ट पार्छु।
हे प्रभु, म तपाईंको प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको पवित्र आत्मा ममाथि आयो। म येशूको नाम मा सफल हुन अनुग्रह प्राप्त।
प्रभु, म येशूको नाममा म भित्र भुल्ने हरेक आत्माको विरुद्ध आउँछु। आजबाट, जब म केहि पढ्छु म तिनीहरूलाई सहि र मौलिक रूपमा बुझ्दछु। बिर्सिने भावना, म येशू को नाम मा तपाईं माथि मेरो जुवा भाँच्नुहोस्।
म स्वर्गको अधिकारबाट आदेश दिन्छु कि यो प्रयास अन्तिम चोटि हुनेछ जब म येशूको नाममा फेरि जाम लेख्छु। म येशूको नाममा आध्यात्मिक प्रगतिको लागि प्रार्थना गर्दछु
अघिल्लो लेखमाWAEC परीक्षामा सफलताको लागि प्रार्थना पोइन्टहरू
अर्को लेखमादया बढि को लागी प्रार्थना अंकहरु
भजन १२2 अर्थ पद पद द्वारा